Game Software, pụta na Isiokwu | Holmbygden.se
No Uzo mkpirisi
– Game omume na trainings
– ugbu a na-arụpụta, tebụl na egwuregwu
– Egwuregwu oge maka DM
– Previous afọ 'pụta tebụl na 2000s
– Previous afọ 'usoro nke investments na 2000s
A-LAGSKALENDERN – HSK’s match- na-emega
visa naanị egwuregwu ụbọchị ebe a (även GIF Sundsvalls och Landslagets spelprogram).
A-lagskalendern i programformat (gụnyere. trainings)
Dọrọ mkpịsị aka gị na igbe ma ọ bụ na akwụkwọ mpịakọta mmanya na pịa / pịa green ndenye maka ozi ndị ọzọ.
-Team kalenda ọnwa format (gụnyere. trainings)
Pịa na ndenye kalịnda maka ozi ndị ọzọ.
Pịrịgaa na-atụ / backward na-acha anụnụ anụnụ buttons n'okpuru.
The na kalenda ndị ọzọ formats nke mmekọrịta on mobile / efere / kọmputa:
Mgbe ị na-mmekọrịta gị na ekwentị gị, akpaghị aka na mbụ-otu egwuregwu- na emelitere ọzụzụ oge gị mobile.
OBS! Pịa ebe a iji tinye egwuregwu- na ọzụzụ oge na kalenda gị.Close.
Ọ bụrụ na ị nwere ihe gam akporo ekwentị ma ọ bụ na a Gmail / Google akaụntụ? Na nke a, ị na-enwe ohere Google Kalinda, nke nwere ike hụrụ ma na gị na PC na ekwentị mkpanaaka gị kalenda. Pịa na na kalenda n'elu ma soro ntuziaka. Ahụ na-aga n'ime gị ntọala akaụntụ gị na ekwentị na-eme ka n'aka gị Google akaụntụ nẹ ha kalenda na ekwentị. Ahụ na-aga n'ime ekwentị gị kalenda ngwa na-elele na-egosi mbụ otu kalenda.
Ị Iphone? Gå till holmbygden.se/hsklalender (= Direct hit) gị mobile nchọgharị ma detuo-esonụ na adreesị (jide gị aka na):
Mgbe ahụ, mechie nchọgharị na ahụ na-aga n'ime ekwentị gị “ntọala“, “E-post. kọntaktị, kalenda“, “Tinye Account“, “ọzọ“, “Tinye tụrụ ụtụ Kalinda“, tapawa lebara si n'elu (jide gị aka na nke a mgbe na-ebili “tapawa”).
The menus nwere ike anya dị iche iche dabere na ekwentị nlereanya.
I nwekwara ike Embed kalenda na gị onwe gị website ma ọ bụ blog verktyget här.
Ugbu Results, Tebụl na-abịa ọkụ
Gụọ ihe ndị na egwuregwu akụkọ nke na obodo na holmssk.se/alaget na div 5 Medelpad on Lokalfotbollen.nu.
Na-abịa ọkụ Division 5 2018
Isiokwu Division 5 2018
Holms SK oge 2018
Pịa na a egwuregwu n'ihi na zuru ezu game Ama.
Scorer na-abịa ekiri LIGA M.M..
Game Software, scorer, publikliga 2017
Top scorers 2016: Holms SK, niile ìgwè 2016: Division 5
A na-n'akụkụ ma ọ bụ Holm si Sports Club saịtị.
Gara aga tebụl na IHE n'oge 2000s
Top scorers 2016: Holms SK, niile ìgwè: Division 5
Top scorers: Holms SK, niile ìgwè: Division 5.
Top scorers: Holms SK (gụnyere. odo / red card), niile ìgwè: Division 5.
Guldfemman 2014: HSK si Guldfemmansida, 2014:Läs hur det gick för spelarna på Guldfemman 2014.
1/16-ikpeazụ 2014-06-18 Torp Hammar Ọ BỤRỤ – Holms SK 4-1
2013 Division 5 Base / Spring (5:a) (April-August)
lag 1-8 ruru eru maka div. 5 Mgbụsị akwụkwọ na Iwu 9-16 ka div 6 ịda.
2013 Division 5 ịda (5:a)
2013 Distriktsmästerskap (na-akọrọ 9:a)
1/32-ikpeazụ 2013-05-22 19:00 Holms SK – Kovlands Ọ BỤRỤ 6-4 (mgbe penalties)
1/16-ikpeazụ 2013-06-12 19:00 Holms SK – Lucksta Ọ BỤRỤ 3-0
1/8-ikpeazụ 2013-07-24 19:00 Holms SK – Ånge Ọ BỤRỤ 0-4 (0-0 ka 60 m, HSK mkpebi.)
Berners Cup, okpomọkụ Cup
isi iyi: SvFF och resultat från Holmbygden.se’s SMS uka nzipu ozi 2012.
isi iyi: SvFF.
2009 Division 7 (3:a) “B-otu”
Gara aga usoro Investments N'oge 2000s
nchịkọta (na SvFF njikọ) nke gara aga results for Holms Sportklubb
* Ezughị oke scorer tebụl (mismatched na ngụkọta ọnụ ọgụgụ nke ihe mgbaru ọsọ gbatara).
isi iyi: Holm Arụpụta ikpeazụ decenniumet on SvFF hemsida.
Ị nwere a mma nnyocha nke gara aga afọ results, biko ezite ya anyị.
17/1: Utah: Warning klas 1, snoo na-ada, V... Snöfall som i södra delen fram... GỤKWUO
Snöfall ger risk för snöhalka och snör&... GỤKWUO